Netizen Report: Noraràn’i Sri Lanka Ao Anatin’ny Herisetra Ara-pinoana Ny Media Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2018 5:33 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, Italiano, русский, English
Nanome baiko ho an'ireo mpandraharahan'ny fifandraisandavitra mba hanakana ny Facebook, Viber sy ny WhatsApp tamin'ny 7 martsa ny Vaomieram-pifandraisan-davitra ao Sri Lanka ho setrin'ny herisetra ara-pivavahana.
Ny 7 Martsa, nametraka ny firenena latsaka an-katerena mandritra ny folo andro ny manampahefana, sambany hatramin'ny taona 2011, raha tavafoaka tamin'ny ady an-tranony i Sri Lanka.
Naneho hevitra momba ny fepetra tamin'ny fanadihadiana tao amin'ny Groundviews, fampahalalam-baovaon'olon-tsotra tsy miankina iray monina ao an-drenivohitra Colombo, nilaza i Nalaka Gunawardene, mpanao gazety sady mpaneho hevitra ara-tsosialy, fa tsy misy dikany io paikady io ary mitondra voka-dratsy ho an'ny vahoaka manontolo, mahatonga ny fianakaviana tsy afaka mifanerasera amin'ny fotoanan'ny fisalasalana sy mampitombo ny herisetra an-dalambe. Nanoratra izy hoe:
Namely an'ireo mpanao gazety mirahalahy Timothy sy Daniel Elombah avy ao amin'ny tranokalam-baovao tsy miankina Elombah tamin'ny fiampangana heloka antserasera sy fampihorohoroana tamin'ny 1 Martsa ny fitsarana federaly tao Abuja. Mitantara momba ny Boko Haram sy ny fiampangana kolikoly ao amin'ny ambaratonga ambony ao amin'ny governemanta ity tranonkala ity.
China Digital Times namoaka fiampangana avy amin'ny mpisera Weibo iray izay milaza fa nangalaran'ny mpiasa ara-tekinika ao amin'ny Apple ny tahirin'izy ireo. Nipoitra andro vitsy monja izany rehefa nametraka ny asany ao amin'ny Tanibe Shina hosahanin'ny orinasam-panjakana Shinoa Guizhou Cloud Big Data ny Apple.
Ao anatin'ny herin'ity hetsi-panoherana amin'ny ririnina ao Iran ity, nisy ny fandraràna vonjimaika ny fampiharana hafatra Telegram nanomboka ny 30 Desambra 2017 hatramin'ny 13 Janoary 2018. Milaza ny porofo ara-teknika vaovao avy amin'ny Oniversiten'i Teheran sy ny Fanarahamaso Misokatra amin'ny Fitsabahana amin'ny Tambajotra fa nanohy nametra ny fampiasana fampiharana ny manampahefana taoriana ny nanesorana ny fandraràna.
Nametraka fitoriana ny vondron'olom-pirenena Amerikana izay nosakanan'ny filoha amerikana Donald Trump ny Twitter-n'izy ireo, fitoriana miampanga ny filoha ho manitsakitsaka ny fahalalaham-pitenenana ao anaty seha-pifanakalozan-dresaka ho an'ny daholobe. Nolazain'ny Ivotoerana Knight First Amendment ao amin'ny Oniversiten'i Columbia fa nilaza ireo mpitory fa amin'ny fanakanana ireo olom-pirenena an-jatony tsy hamaly ny siokany ampahibemaso, mametra tanteraka ny zon'izy ireo tamin'ny fanitsiana voalohany i Trump. Hiatrika olana goavana manodidina ny fandraisana ny kabary antserasera ataon'ny manampahefam-panjakana sy ny fitsarana ny fahalalahana miteny ao amin'ny sehatra an-tseraseran'ny olon-tsotra ny raharaha.
Fanehoan-kevitra voasakantsakana: Fikarohana momba ny lalàna manameloka ny fanehoan-kevitra antserasera ao Azia – Sekolin'ny Serasera Annenberg, Oniversiten'i Pennsylvania
Fandinihana ny Fanapahan-kevitra : Lesona Voalohany sy Fomba Vaovao – Omidyar Network sy Upturn
Ny Rohy Mampifandray: Fiarovam-pandaminana ho an'ny Fiarahamonim-pirenena – The Engine Room
Afef Abrougui, Ellery Roberts Biddle Rohith Jyothish, Rezwan Islam, Oiwan Lam, Karolle Rabarison sy Sarah Myers West no niara-nanoratra ity tatitra ity.